Mandalay Region – MCDC
၄.၄ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
၄.၅ အခြား မြို့ရွာများ
၇.၄ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
မန္တလေးတိုင်းကို မြန်မာမင်းများ လက်ထက်က တမ္ပဒီပတိုင်းဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ်၊ မျိုးချစ်စိတ်တို့ ထွန်းပေါက်ဖွားရာဒေသဟု ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ အမရပူရတောင်ပိုင်း တောင်သမန်၊ ရွှေစာရံ၊ ပုပ္ပါး စသည့် ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် ကျောက်ခေတ်ကာလမှစ၍ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အခြေခံ အညာသားယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ထူတောင်ခဲ့ခြင်း (ထိုဒေသများတွင် ကျောက်ခေတ်ဦးပိုင်း လူသားများ အသုံးပြုခဲ့သည့် အသုံးအဆောင်များ၊ ကျောက်လက်နက်များ တစ်ပုံတစ်ပင် တွေ့ရှိခဲ့ရ။ ထိုအသုံးပြုခဲ့သော ခေတ်ကာလကို “အညာသားယဉ်ကျေးမှု” (Anyarthian Culture)ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်)၊ သရေခေတ္တရာ၊ ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင် မိုင်းမော၊ ဝတီး စသည့် ပျူရှေးဟောင်းမြို့များ တည်ရှိခြင်း၊ တကောင်း(ဘီစီ-၂)၊ ပုဂံ(အေဒီ– ၈၄၉)၊ အမရပူရ(အေဒီ- ၁၁၄၄)၊ ပင်းယ(အေဒီ-၁၃၁၂)၊ အင်းဝ(အေဒီ-၁၃၆၄)၊ ညောင်ရမ်း(အေဒီ-၁၅၉၇)၊ ရတနာပုံ(အေဒီ-၁၈၅၉) စသော မြန်မာမင်းနေပြည်တော်များ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း၊ (အေဒီ-၁၀၄၄) ပုဂံအနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ထူထောင်ခဲ့ခြင်း၊ လယ်ကွင်း(၁၁)ခရိုင် (နောင် (၉)ခရိုင်)တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု ထွန်းကားခဲ့ခြင်း၊ (အေဒီ-၁၁၁၂)မှ စ၍ မြန်မာစာအရေးအသား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း၊ ပင်းမြို့(၄၃)မြို့ ထူထောင်၍ ကာကွယ်ရေး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
ကွဲပြားခြားနားသော ရာသီဥတုများကို တွေ့ရသည်။ အရှေ့ဖက် တောင်တန်းဒေသများ(မိုးကုတ် နှင့် ပြင်ဦးလွင်) တွင် ပူနွေးစိုစွတ်သော ရာသီဥတုမျိုးတွေ့ရသည်။ ၎င်းဒေသများတွင် အပူချိန်မှာ ၇၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် မှ ၇၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ထိရှိသည်။ ဆောင်းဥတုတွင် ၆၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သာ ရှိတတ်သည်။ မိုးရေချိန်မှာ မိုးကုတ်မြို့တွင် ၁၀ဝ လက်မ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ၆၀ လက်မကျော် ထိရရှိပါသည်။
တောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သည့် ရာသီဥတုမျိုးကိုတွေ့ရသည်။ ပျှမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၈၈ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး နေ့ခင်းဘက်အပူချိန်မှာ ၁၁၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိရှိတတ်သည်။ ဆောင်းဥတုတွင်မူ အပူချိန်မှာ ၅၀ ဒီဂရီထိ ကျဆင်းတတ်သည်။ မိုးရေချိန်မှာ မန္တလေးနှင့်ကျောက်ဆည်လွင်ပြင်တွင် ၃၂ မှ ၃၄ လက်မ၊ အလယ်ပိုင်းရှိ မြင်းခြံတွင် ၂၇ လက်မ၊ ပုပ္ပါးတောင်တစ်ဝိုက်ဒေသများတွင် ၄၀ လက်မ ထိရှိတတ်ပြီး ကျန်တောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ၅၆ လက်မ ထိရွာသွန်းတတ်ပါသည်။
မန္တ​လေးတိုင်းကို ယခင်က ၂၆ဘီလမ်းနှင့် ၆၆လမ်း​ထောင့်ရှိ တိုင်း​​အေးချမ်းသာယာ​ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး​ရေး​ကောင်စီမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။၂၀၁၁ခုနှစ် အစိုးရအသစ်တက်လာချိန်မှစကာ မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအဖြစ် ၆၄လမ်းနှင့် ၂၄လမ်း​ထောင့်တွင် ဖွင့်လှစ်ကာ တိုင်း​ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် အမှူးပြု​​သော တိုင်း​ဒေသကြီးဝန်ကြီးများမှ အုပ်ချုပ်သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် စနစ်အသစ်မှစတင်ကာ မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီးအတွက် တိုင်း​ဒေသကြီးလွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မ​တော်သားလွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်​သော တိုင်း​ဒေသကြီးဥပ​ဒေပြုလွှတ်​တော် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။မူလလွှတ်​တော်မှာ ၆၅လမ်းနှင့် ၂၄လမ်း​​ထောင့်ရှိ တိုင်းတရားလွှတ်​တော်အ​ဆောက်အအုံတွင် တည်ရှိခဲ့ကာ ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်​တော်သက်တမ်းမှစ၍ ၉လမ်း လမ်း၇၀နှင့် ၇၃လမ်းကြားရှိ လွှတ်​တော်အ​ဆောက်အအုံတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
မြို့နယ်ပေါင်း (၂၈) ခု ရှိသည်။
မြို့ပေါင်း (၂၈) မြို့၊ ရပ်ကွက်ပေါင်း (၂၇၁) ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၁၄၁၅) အုပ်စု၊ ရွာပေါင်း (၄၇၇၇) ရွာ ရှိသည်။ 
၂၀၁၄ခုနှစ် သန်း​ခေါင်စာရင်းအရ မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး၏ လူဦး​ရေသည် ၆၁၆၅၇၂၃ဦးဖြစ်ကာ ကျားဦး​ရေ ၂၉၂၈၃၆၇ မဦး​ရေမှာ ၃၂၃၇၃၅၆ဦးဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦး​ရေ ၅၄သန်း၏ ၁၂ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းပြီးလျှင် တတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။
မန္တ​လေးတိုင်းသည် ၁၉၇၃သန်း​ခေါင်စာရင်းတွင် ၃၆၆၈၄၉၃ဦးနှင့် ၁၉၈၃သန်း​ခေါင်စာရင်းတွင် ၄၅၇၇၇၆၂ဦးရှိရာ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်း ၃၅% တိုးတက်လာခဲ့သည်။တိုင်းပြည်လူဦး​ရေ၏ ၁၃%ရှိခဲ့ရာမှ ၁၂%သို့ ကျဆင်းသွားသည်။အ​ကြောင်းမှာ ပြည်​ထောင်စုနယ်​မြေအား မန္တ​လေးတိုင်းမှခွဲထုတ်၍ ​ရေတွက်ထား​သော​ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မန္တ​လေးတိုင်းအတွင်းရှိ ခရိုင်များတွင် မန္တ​လေးခရိုင်မှာ လူဦး​ရေအများဆုံးဖြစ်ကာ ​ညောင်ဦးခရိုင်မှာ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။သန်း​ခေါင်စာရင်း​ကောက်ယူစဉ်က ​ကျောက်ပန်း​တောင်းမြို့နယ်အား ​ညောင်ဦးခရိုင်အတွင်း ထည့်သွင်းခြင်း မပြုရ​သေး​ပေ။
မန္တ​လေးတိုင်း၏ လူဦး​ရေသိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၂၀၀ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၇၆ဦးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အင်မတန်မြင့်မား​နေသည်။ရန်ကုန်တိုင်းပြီးလျှင် ဒုတိယ​မြောက် လူဦး​ရေအသိပ်သည်းဆုံးနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။၁၉၇၃တွင် ၉၉ဦး၊၁၉၈၃တွင် ၁၂၄ဦးရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၀ဦးသို့ မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်း​ဒေသကြီးအတွင်း လူ၁၀၀၌ ၆၅ဦးသည် ​ကျေးလက်၌ ​နေထိုင်ကြပြီး ၃၅ဦးသည် မြို့ပြတွင် ​နေထိုင်ကြသည်။မြို့ပြဦး​​ရေ ၇၀%ရှိ​သော ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ၃၆%ရှိ​သော ကချင်ပြည်နယ်ပြီးလျှင် တတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ မန္တလေးတိုင်း၏ လူဦးရေအများစုမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်သည်။သို့သော်မန္တလေးမြို့ပြဧရိယာတွင် ယူနန်ပြည်မှပြောင်းလာသော တရုတ်လူမျိုးများလည်းနေထိုင်ကြသည်။ အိန္ဒိယလူမျိုးများလည်းနေကြသည်။ တိုင်းဒေသကြီး၏ အရှေ့ဘက်နယ်စပ်တစ်လျောက်တွင် ရှမ်းလူမျိုးများလည်းနေထိုင်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအများစုမှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင်ရှိသည်။အထက်မြန်မာပြည်၏ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်အများစုမှာ မန္တလေးတိုင်းတွင်ရှိသည်။ထို့အပြင် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များလည်းတည်ရှိသည်။
Mandalay Region (Burmese: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, pronounced [máɴdəlé táiɴ dèθa̰ dʑí], formerly Mandalay Division) is an administrative division of Myanmar. It is located in the center of the country, bordering Sagaing Region and Magway Region to the west, Shan State to the east, and Bago Region and Kayin State to the south. The regional capital is Mandalay. To the south of the region lies the national capital of Nay Pyi Taw. The division consists of seven districts, which are subdivided into 30 townships and 2,320 wards and village-tracts.
Mandalay Region is important in Myanmar’s economy, accounting for 15% of the national economy. It is under the administration of the Mandalay Region Government.
The history of Mandalay Region is the same as that of much of Upper Myanmar except that for much of Burmese history, the political power emanated out of royal capitals located in Mandalay Region. The country’s present capital, Naypyidaw, and most former royal capitals of the Burmese nation—Bagan, Ava, Amarapura, Mandalay—are all located here.
After the fall of Pagan to the Mongols in 1287, parts of central Myanmar came to be controlled byaseries of rulers: the Mongols (1287-c.1303), Myinsaing (1298–1313), Pinya (1313–1364), and Sagaing (1315–1364). In 1364, Ava kingdom led by Burmanized Shan kings reunified all of central Myanmar. Central Myanmar was under Ava’s control until 1527, and under the Shans of Monhyin (1527–1555). Burmese literature and culture came into its own during this era. Central Myanmar was part of the Taungoo kingdom from 1555 to 1752. Parts of the region fell briefly to the Mons of Pegu (Bago) (1752–1753). Konbaung Dynasty ruled the region until December 1885 when it lost all of Upper Myanmar in the Third Anglo-Burmese War.
Religion in Mandalay (2015) Buddhism (95.7%) Islam (3%) Christianity (1.1%) Hinduism (0.2%)
Agriculture is the primary economical source of livelihood. Primary crops grown within Mandalay Region are rice, wheat, maize, peanut, sesame, cotton, legumes, tobacco, chili, and vegetables. Industry, including alcoholic breweries, textile factories, sugar mills, and gem mines also exists. Tourism now formsasubstantial part of Mandalay Region’s economy, as it contains many historical sites including Mandalay, Amarapura, Bagan, Pyin U Lwin, Mount Popa, and Ava. Hardwoods such as teak and thanaka are also harvested.
Educational opportunities in Myanmar are extremely limited outside the main cities of Yangon and Mandalay. According to official statistics, over 1 million students were enrolled in the division’s 4,467 primary and secondary schools in 2005. Of the total, the vast majority, about 4,000, were primary schools. Only about 13% of primary school students make it to high school.
The general state of health care in Myanmar is poor. The military government spends between 0.5% to 3% of the country’s GDP on health care, consistently ranking among the lowest in the world. Although health care is nominally free, in reality patients have to pay for medicine and treatment even in public clinics and hospitals. Public hospitals lack many of the basic facilities and equipment. The following isasummary of the public health system in the division, in the fiscal year 2002-2003.
In 2005, Mandalay Region’s public health care system had slightly over 1,000 doctors and about 2,000 nurses working in 44 hospitals and 44 health clinics. Over 30 of the hospitals had less than 100 beds. Since almost all of large public hospitals and private hospitals, and doctors are located in Mandalay, these low numbers foradivision with 7.7 million are actually even worse in the rest of the division, though these figures are believed to have improved by the advent of Naypyidaw as the nation’s capital in 2006 although the level of improvement remains unreported. The well-to-do bypass the public health system and go to private clinics in Mandalay or Yangon in order to receive quicker medical attention and high-quality service. The wealthy routinely go abroad (usually Bangkok or Singapore) for treatment.
16,856 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 63 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
← Mandalay City Development CommitteeMandalay →
16,858 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 65 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
16,861 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 68 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း